ကြိုးမဲ့ LED မျက်နှာပြင် 4G နှင့်အတူ, ဝိုင်ဖိုင်,ဂျီအက်စ်အမ်, GPRS, CDMA, 3ဂ, usb disk ကို - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
ကြိုးမဲ့ LED မျက်နှာပြင် 4G အသုံးပြုသည်, ဝိုင်ဖိုင်,ဂျီအက်စ်အမ်, GPRS, CDMA, 3ခရီးဝေးကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက် G နှင့်အခြားကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ real-time နှင့်အကြီးစားစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကွန်ယက်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိ. ဒါဟာဒေသအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မပေးပါ, ကြားကာလနှင့်ဝါယာကြိုး. ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များကဘာတွေလဲ?
1、 အကြီးစားကွန်ယက်ကိုစီမံကိန်း: ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် GSM ကိုမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့သည်, GPRS, CDMA, 3, G နှင့်အခြားကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ. TCP / အိုင်ပီကွန်ယက်ဂီယာ protocol ကိုရွေးချယ်ထားသည်, နှင့် terminal ကွန်ယက်၏နံပါတ်သတ်မထားပါ, ဒီတော့ကွန်ယက်ကိုအကြီးစားစီစဉ်ထားတယ်.
2、 Real Time သတင်းထုတ်ပြန်ချက်: ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်သည်သတင်းအချက်အလက်စင်တာမှပေးပို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးလက်ခံနိုင်သည်.
3、 ကြားကာလအားဖြင့်ကန့်သတ်မထား: ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးဒေသခံအတွက်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို signal ကိုလွှမ်းခြုံလည်းမရှိသုံးနိုင်သည်, အကွာအဝေးနှင့်တိမ်းညွတ်၏သတ်မှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး.
4、 အဆင်ပြေ device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: ဘာလို့လဲဆိုတော့ optical cable ဒါမှမဟုတ် communication cable ကိုတင်စရာမလိုပါ, ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ orientation ကိုရွေးချယ်ဖို့လွယ်ကူသည်. modular စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်, သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားသည်, တက်ကြွသော dial-up အင်တာနက်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုကိုသေချာစေရန်လိုင်းတက်ကြွစွာပြန်လည်ခေါ်ဆိုမှု, ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပါဝါကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပိတ်ထားသည့်အခါမူရင်းအချက်အလက်ကိုပြသလိမ့်မည်, Anti- ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ကြမ်းတမ်းသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်, မြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်အပူချိန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အနိမ့်သောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေသားတကျ.
5、 အကွိမျမြားစှာသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိနည်းလမ်းများ: ရွေးချယ်ထားသည့်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များအရသိရသည်, ကြိုးမဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ကို update လုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နည်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, နှင့်သတင်းအချက်အလက်အုပ်စုများအတွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်, အုပ်စုများနှင့်တစ်ခုတည်းအချက်. ကဲ့သို့: အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကွန်ပျူတာကိုပို့ရန်, ကွန်ပျူတာကိုအထူးသတင်းအချက်အလက်ပို့လွှတ်မှုစနစ်မှတဆင့်ပေးပို့သည်, အထွေထွေမိုဘိုင်းဖုန်းကိုပို့သည်, စသည်တို့.
6、 LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ရွေးစရာများ: မိုးလုံလေလုံအမျိုးမျိုးတို့ကို, ပြင်ပတွင် semi, ပြင်ပတစ်ခုတည်းမူလတန်းအရောင်, နှစ်ဆမူလတန်းအရောင်, ရောင်စုံ, စသည်တို့.
7、 ဘာသာစကားမျိုးစုံရွေးချယ်မှု: ထိုကဲ့သို့သောနံပါတ်များအဖြစ်, အက္ခရာများ, တရုတ်, အင်္ဂလိပ်, စသည်တို့.
8、 ကြွယ်ဝသောသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်နည်းလမ်းများ: တစ်ခုချင်းစီကိုသတင်းအချက်အလက်၎င်း၏ display ကိုနည်းလမ်းနှင့်နေထိုင်ရာအချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်, မည်သည့်အစီအစဉ်တွင်ပြသနိုင်ပါတယ်, အလွန်အထိခိုက်မခံ.
9、 အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက် encryption ကိုနည်းလမ်းများ: ဥပမာ, မှတ်ပုံတင်ကုဒ်နှင့်စစ်ဆေးရေးကုဒ်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသတ်မှတ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်အထူးနံပါတ်ကိုသာလက်ခံနိုင်သည်. သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအာမခံပါ.